मिसन पटाका : तस्कर ओसारेको ओसार्यै, प्रहरी समातेको समात्यै « Loktantrapost
मिसन पटाका : तस्कर ओसारेको ओसार्यै, प्रहरी समातेको समात्यै
२१ कार्तिक २०७७, शुक्रबार १९:२७
झापा, २१ कार्तिक । दसै सकिएपछि सीमा क्षेत्रमा प्रहरीको मुख्य काम नै भएको छ पटाका समाउने ।
विहीवार राति मेचीनगरको वडा नं. ४, ५ र ६ बाट २ लाख ३० हजार रुपैयाँको पटाका प्रहरीले झ्याप्पै समात्यो ।
बाहुनडाँगी र नकलबन्दा प्रहरी चौकी मात्र होइन, काँकरभिट्टा इलाका र जिल्लाको प्रहरी टोली समेत पटाका समाउने मिसनमा लागेको पाइएको छ ।
दुई दिन अघि झापाका विभिन्न नाकाबाट ६ लाख ५० हजार रुपैयाँको पटाका शनिश्चरे, धुलावारी र जिल्लाको प्रहरी टोलीले पक्रेको थियो ।
धुलावारीमा पटाका बोक्ने टेम्पो र त्यसका चालक पनि कार्वाहीमा परेका छन् ।
हिजो मात्र भद्रपुर सीमा क्षेत्रबाट ३ लाख रुपैयाँको पटाका बरामद गरेको थियो ।
यसरी घटनाक्रम हेर्दा झापाको प्रहरी शक्ति अहिले पटाका रोक्न नाबीदेखिको बल लगाएर कसरत गरिरहेको छ ।
तथापि, किन भित्रिइरहन्छ त पटाका ? सीमामा ठूलो संख्यामा प्रहरी तैनाथ हुँदा पनि किन तस्करहरु पटाका छिराउने आँट गर्छन् ? यो प्रश्न भने आश्चर्यजनक नै छ ।
सीमा क्षेत्रमा रहेर सामान्य व्यवसाय चलाइरहेका एक व्यवसायी विगतमा प्रहरीलाई घुस खुवाएर पटाका भित्राउने चलन रहेको हुँदा अझै पनि तस्करहरुको त्यो बानी नहटेको बताउँछन् ।
‘झोलामा सामान बोकेर ल्याउँदा पुलिसले के हो त्यो भनेर सोध्यो भने ए केही होइन भन्दै हातमा खुसुक्क सयदेखि हजारसम्मका नोट राखिदिने चलन थियो,’ ती व्यवसायी भन्छन्–‘जमाना पहिलेको जस्तो छैन, पुलिस पनि लोभिने खालका परेनन् होला, त्यही भएर धमाधम सामान पक्राउ पर्दैछ ।’
पत्रकार र नागरिक समाजको खबरदारीले पनि सीमामा तस्करी रोक्न प्रहरीलाई बाध्यता आइलाग्ने उनको भनाई छ । ‘पत्रकारले देख्लान् भन्दा पनि लेख्लान् भन्ने डर लाग्दो हो’–उनी बताउँछन् ।
जानकारहरुका अनुसार काँकरभिट्टा र त्यसको आसपासको क्षेत्रबाट विगतमा तस्करी धन्धा अचाक्ली हुने गरेको थियो । नकलबन्दा र भान्साखोला (गैरीगाउँ)लाई दुई नम्बरी भन्सार नैै जस्तो बनाउँदै आएका छन् तस्करहरुले ।
तर अहिले ती नाकामा प्रहरीले एउटा पनि सामान छिर्न दिएको छैन । पछिल्लो तथ्यांक हेर्ने हो भने एक महिनामा पक्राउ परेका सामानको आधाभन्दा बढी हिस्सा त्यही क्षेत्रबाट प्रहरीले समातेको देखिन्छ ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी उपरीक्षक कृष्णप्रसाद कोइरालाले यसपालीको तिहारमा पटाका आतंक बन्द गर्ने सोचका साथ ‘मिसन पटाका’ चलाइरहेको बताउने गरेका छन् । उनका जुनियर अफिसरहरुले समेत अभियानमा राम्रै साथ दिएको कारण ठूलो मात्रामा पटाका पक्राउ परिरहेको हो ।
उद्योग वाणिज्य संघका एक पदाधिकारी प्रहरीले पटाका पड्काउने माथि कडा कार्वाही गर्ने नीति नलिएसम्म लुकीछिपी भारतबाट पटाका भित्रिने जिकीर गर्छन् ।
‘पटाका पड्काउन हुँदैन र पाइँदैन भन्ने यकिन नभएसम्म जुनसुकै माध्यमबाट पनि पटाका ल्याउँछन्’, ती पदाधिकारी भन्छन्–‘ठूलाबडाहरु नै पटाकाको ठूलो उपभोक्ता छन्, तिनले जत्ति दाम हालेर पनि किनिदिए पछि तस्करले ल्याइहाल्छन् नि ।’
यसपाली पटाका रोक्ने प्रहरीको प्रयास सराहनीय छ । अब तिहार जति नजिक आउँछ, उति धेरै चुनौति भने आउँदैछ प्रहरीका लागि । किनकि तस्करहरु प्रहरीले कतिञ्जेल कडाई गर्ला र भन्दै घुसको मुठो बोकेर गौडा कुरिरहेका छन् ।